Iindaba -Ukuba ukupakisha kwakho kuyaboliswa ziintsholongwane okanye kuyabukeka
Ukuba ukupakisha kwakho kuyaboliswa ziintsholongwane okanye kuyabukeka
I-Eco-friendly ngoku iba yinto, abantu abaninzi bayayikhathalela imihla ngemihla, njengoko sijamelene nokuphakamisa iintlekele ezibangelwe kukutshatyalaliswa kwendalo ngokwethu. Kithi, njengomvelisi webhokisi yokupakisha, ihlala ibuzwa, ukuba ibhokisi yakho iyabola?
Kuqala, masifumanise ukuba yintoni enokuboliswa ziintsholongwane?
“Okunokuboliswa ziintsholongwane” kubhekisa kwisakhono sezinto sokuba sitshatyalaliswe (siboleke) sisenzo sezidalwa ezincinci ezifana neebhaktiriya okanye ifungi yebhayoloji (enayo okanye engenayo ioksijini) ngelixa ifakwa kwimeko yendalo. Akukho monakalo kwindalo ngexesha lenkqubo.
Emva koko, masibone ukuba yeyiphi into ebesiyisebenzisa kwibhokisi? Ngokwesiqhelo yikhadibhodi engwevu, iphepha eligutyungelweyo, iphepha lobugcisa, iglu edityaniswe nopende wokuprinta kunye nokusikelwa umda.
Ngokwenyani ezo azinakuba yinxalenye yezinto ezinokuboliswa ziintsholongwane yiglue kunye nokusikelwa umda.
Masithi iglu kuqala. Kwinkoliso yeglu esetyenziswe kwintengiso, iyathotywa kodwa ifuna imeko ebaluleke kakhulu. Kodwa kukho izinto ezincamathelayo ezenziweyo, lelo likamva lethu eliqaqambileyo lomzi mveliso wethu.
Ukunciphisa, sinokukhetha izinto eziluhlaza ngaphandle kokongeza nawuphi na umda okanye ukongeza isithintelo seoyile.
Ke ngoko, ngokusisiseko, ibhokisi yethu yokupakisha inobuhlobo.